कालिकोटको ग्रामिण समुदायमा बसोबास गर्ने महिलाको जनजीवन ज्यादै कष्टकर । « Postpati – News For All
कालिकोटको ग्रामिण समुदायमा बसोबास गर्ने महिलाको जनजीवन ज्यादै कष्टकर ।
खडक बिश्वकर्मा/माघ १०, कालिकोट । कालिकोटको ग्रामिण समुदायमा बसोबास गर्ने महिलाको जनजीवन ज्यादै कष्टकर छ । उनीहरुको जीवन बाह्रै महिना बन जंगल, मेला पात र खेतबारीकै काममा बित्ने गरेको छ । घरायसी कामै कामको चापले चाड पर्व समेत कतिखेर आउँछ, कतिखेर जान्छ, पत्तै नहुने कालिकोटको पलाँता गाँउपालिका वडा नं. १ निवासी स्थानियवासी मन्सरा न्यौपानेले बताइन ।
यहाँका महिलालाई घरको कामकाजले बिरामी पर्दा सिटामोल खान स्वास्थ्य संस्था जाने पनि फुर्सद हुँदैन् । यसले गर्दा विभिन्न खाले दीर्घरोगबाट संक्रमित हुनु परेको उनको दूखेसो छ ।
एकातिर खेतबारीको कामको चाप, अर्कातिर महिलाले मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता पुरुषमा हावी भएकाले ग्रामीण महिला झनै समस्या बेहोर्नु परेको पचालझरना गाँउपालिका वडा नं. ८ निवासी उब्जी बिकले बताइन । बालबच्चालाई स्यहारदेखी खेतबारीको काम हुँदै चुलोचौकासम्म आफै गर्नुपर्ने यहाँका महिलाको नियति भएको बिकले बताइन । त्यसमाथि कर्णालीका दलित महिलाको सानैमा बिहे गराइदिने यहाँको प्रचलनले २० वर्ष नकाट्दै बच्चाको आमा बन्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाई छ ।
चेतनाको कमीले उनीहरुको शरीर बच्चा जन्माउने मेसिन जस्तै सावित भएको छ । तिलागुफा नगरपालिकाकी उप प्रमूख दर्शना नेपालीले दलित समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले कापी कलम किन्ने पैसाको अभावमा कलिलै उमेरमा पढाइ लेखाइबाट वञ्चित हुने र बिहे गराइदिने यहाँका प्रचलनले यहाँका महिलाको जीवन एकदमै कष्टकर भएको बताइन । राजनीतिक चेतनाको हिसाबमा यसहाँको समुदाय निकै नै पछाडि रहेको उनको भनाई छ ।
यहाँका महिलाको चैत महिनादेखि सुरु भएको काम पुस माघको अत्यन्तै चिसो हिमपात हुने समयसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छ । यहाँका महिला उत्थानको लागि च्याउ जस्तै खोलिएका गैरसरकारी संस्थाले पनि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
तस्बिरः खडक बिश्वकर्मा कालिकोट